Ny nosy sy morontsiraka tsara indrindra any Malezia | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | nosy, Malasia, Ocio, Fitsangatsanganana any Azia
Azia atsimo atsinanana manana toerana mahafinaritra ary mino aho fa ny morontsiraka sy ny nosy tsara indrindra eran'izao tontolo izao dia misy. Toerana lavitra dia lavitra, sidina ora maro, saingy tsara ny valiny ka mendrika ny miakatra amin'ny fiaramanidina ary mandeha indraindray.
Malasia Fanjakana mpanjaka voalamina araka ny lalàm-panorenana izy io, ahitana faritany maro izay Kuala Lumpur no renivohiny. Izy io dia manana mponina manodidina ny 30 tapitrisa ka io no iray amin'ireo firenena be mponina indrindra amin'ny faritra. Sarobidy ny teny ampiasain'ny maro hilazana ity firenena ity. Fantaro ny antony!
1 Ny nosy tsara indrindra any Malezia
2 Ny morontsiraka tsara indrindra any Malezia
Ny nosy tsara indrindra any Malezia
Ny nosin'i Malezia samy hafa be izy ireo ka misy zavatra ho an'ny karazana mpandeha rehetra fa raha tianao ny masoandro sy ny ranomasina dia tsy mampino ny tolotra. Ny safidy rehetra dia hosivina amin'ny fomba fijery manokana, saingy tahaka ny nolazaiko anao etsy ambony, tsy maintsy mandeha ianao ary hahita ho anao.
Anisan'ireo nosy tsara tarehy indrindra ny Perhentian. Any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Peninsular Malaysia izy ireo ary a toerana tsara eo amin'ny backpackers an'izao tontolo izao. Manana ny rano madio indrindra izy ireo ary izany no mahatonga anao afaka mandehana snorkelling dingana vitsivitsy avy eo amoron-dranomasina ary mankafiza ny zavamananaina an-dranomasina manan-karena.
Avy amin'ireo tanàna mpanjono dia afaka mitaingina sambo ianao ary mandeha mitsangatsangana jereo antsantsa sy sokatra an-dranomasina na mankafy filentehan'ny masoandro. Tsy lazaina intsony ny fahaverezana amin'ny filentehan'ny masoandro mandry amin'ny afo.
Misy ny toerana misy ny karazany sy ny vidinyManomboka amin'ny lafo toa ny Nosy Tuna Bay Resort ka hatrany amin'ny mora vidy toa ny Abdul Chalet. Mba hahatongavanao any dia mila mandeha bus ianao any Kuala Lumpur, ao amin'ny Station Hentian Putra, ary mandeha adiny sivy. Na manidina avy any an-drenivohitra mankany Kota Bharu ary mandray taxi mankany Kuala Besut amoron-tsiraka.
Tioman nosy mahafinaritra hafa io. Tena malaza eo amin'ny tsenan'ny fizahan-tany izy io satria nataon'ny gazety Time nanao azy io ny nosy tsara tarehy indrindra eto an-tany amin'ny taona 70. Ny fizahantany dia nanova azy kely hatrizay saingy ny tanàna dia mbola manintona ary ny tolotra omena dia miovaova.
Afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny sambo avy any Singapore na amin'ny aotobisy na aiza na aiza ao Malezia mankany Mersing ary avy eo dia mitaingina sambo adiny roa. Na amin'ny fiaramanidina kely avy any Kuala Lumpur ihany koa. Tianao ny rendrarendra aziatika?
Ka ny lahatra dia Langkawi. Ny angano dia nilaza fa nosy voaozona izy io, na dia niova aza ny vintana tamin'ny taona 80 dia nanapa-kevitra ny hampifanaraka ny toekarem-pirenena amin'ny fizahan-tany. Ny nosy iray manontolo dia adidy-free ka hatramin'ny androany dia tsara be.
Manana izany trano fandraisam-bahiny, morontsiraka, trano fisakafoanana, hetsika fizahan-tany ary mahatalanjona lalamby 2.200 710 metatra hahatratra XNUMX metatra ny haavony ary ahafahanao mankasitraka azy amin'ny hatsarany rehetra. Raha amin'ny lafiny fampiantranoana dia azonao atao ny misafidy trano fandraisam-bahiny amin'ny toeram-pambolena voanio taloha mankany amin'ny Four Seasons.
Mba hahatongavana any dia tsy hanana olana ianao satria misy sidina isan'andro na aiza na aiza.
Ho an'ny tantara sy vakoka malay hafa azonao aleha Penang, indray mandeha dia nandinika ny Voahangy Atsinanana tao amin'ny Fanjakana Britanika. Zava-dehibe teo amin'ny lalam-barotra anglisy teo anelanelan'i India sy ny sisa tany Azia izany ary na dia tsy azon'ny fiovana ara-politika tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza dia nahavita namorona indray ny tenany ho toerana fizahan-tany.
Georgetown dia Lova manerantany hoy ny UNESCO, ohatra, ary nanambola vola ny governemanta amin'ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka, fambolena hazo vaovao, fanaovana faritra mpandeha an-tongotra sy hetsika ara-kolontsaina. Malaza ho azy io Fivarotana fivarotana sakafo eny an-dalambe ary matetika ny mpizahatany tonga amin'ny fiaramanidina satria manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena.
Raha tianao ny milentika dia tanjona tsara dia tsara Labuan, nosy natokana hamatsy vola amin'ny orinasa amoron-dranomasina an'arivony. Fialofana ara-bola ho an'ireo mpangalatra fotsy hoditra, hoy isika, manana ny fizaran-tany Formula 1 aza izy io.
Saingy araka ny nolazaiko, ao ambanin'ny rano dia misy harena miafina ho an'ny mpisitrika sy misy sambo aostralianina, amerikana ary na karazana fasana ady aza. Isan-taona, ohatra, dia tadidio ny fahafatesan'ny miaramila mpiray dina 3900 tamin'ny Ady lehibe II.
Ho an'ny fijanonana irery, iray amin'ireo mahatonga anao hilentika ao an-tsainao, dia ao ny nosy nataon'i Layang-Layang. Nosy nateraka tamin'ny tany navotana tamin'ny ranomasina izy mba hametrahana sainam-pirenena any amin'ny faritra notakian'i Shina sy ny firenena hafa.
Ny rano madio mangarahara miaraka amin'ny halaliny izay milentika mihoatra ny roa arivo metatra mankao amin'ny morontsiraka dia paradisa iray hafa ho an'ny mpilomano Nisaina izy io, raha ny marina, tamin'ireo folo tranonkala antsitrika tsara indrindra eto an-tany. Misy haran-dranomasina tsara tarehy ary 40 metatra ny fahitana azo antoka. Ary antsantsa, feso, barracudas, sokatra, ary stingrays.
Nosy mecha hafa hanaovana antsitrika dia Sipadan na dia mba tsy hampidi-doza ny tontolo iainana aza dia tsy misy afa-tsy mpitrandraka 120 monja no avela isan'andro. Corals, trondro an'arivony, antsantsa, fano amin'ny karazany rehetra ary misy fasana sokatra aza ao ambanin'ny rano.
Ireo nosy Redang, ilay nosy tsy miankina Rawa miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny kanto (an'ny sultan daholo) ary Pulau Pangkor, miaraka amin'ny fanahin'izy ireo Malahelo mbola ao anaty lisitra.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Malezia
Ankehitriny dia anjaran'ny tora-pasika. Manana nosy am-polony any Malezia tamin'izany misy morontsiraka mahafinaritra an-jatony ary maro amin'izy ireo no zara raha fantatra ka mora vidy izy ireo, vitsy ny mpizahatany ary voajanahary kokoa.
Ny malaza indrindra dia ny morontsiraka atsinanana amin'ny saikinosy Malay.. Mora azo izy ireo satria misy sidina mora ary izy ireo no toerana tena tianao amin'ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro. Ireto ny morontsirak'i Redang, ireo any amin'ireo nosy Perhentian ary ny valan-javaboary an-dranomasina ao amin'ny nosy Tioman.
Etsy ankilany dia ny morontsiraka amin'ny morontsiraka andrefan'ny saikinosy Malay. Miresaka momba ny nosy tsy andoavan-ketra aho Langwaki, miaraka amoron-dranomasina kely nefa tsara tarehy ary fiainana fizahan-tany be dia be, tsy misy vanim-potoana mononta izay misy fiantraikany amin'izy ireo sy amin'ny riandrano tsy hay hadinoina, ny morontsirak'ilay nosy Pangkor sy Borneo, nosy zarain'i Malezia, Indonezia ary Brunei.
Ny zava-dehibe rehefa mitsidika an'i Malezia sy ny nosiny ary ny morony dia mandosira ny monontaona. Ny vanim-potoanan'ny rotsakorana dia eo anelanelan'ny Novambra sy martsa, eo amin'ny morontsiraka atsinanana. Avy ny orana. Aorian'izay dia ilaina ny mitondra tabilaoandro sy fanafody famonoana bibikely.
Ny ambiny, ny faniriana te hiala voly sy hankafy paradisa an-tany dia toa tsy ho very velively.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » nosy » Ny nosy sy morontsiraka tsara indrindra any Malezia
Carmina Yébenes Aguilera dia hoy izy:
Lahatsoratra mahaliana fa tsy mazava amiko ny monsoons. Raha mandeha amin'ny volana oktobra aiza amin'ireo nosy azoko tsidihina aho dia tsy hanana toetr'andro ratsy?!
Valiny tamin'i Carmina Yébenes Aguilera
Inona no tokony ho fantatrao raha mankany Shily ianao?